Find My Friends 18.5.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 18.5.0 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား လူမႈေရး Find My Friends
Find My Friends ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မိမိသူငယ်ချင်းများကိုရှာပါသင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ့်ဝန်ကြီးချုပ်တည်နေရာခွဲဝေမှု App ဖြစ်ပါတယ်:
•အချက်အလက် Get - စသည်တို့ကို ETA, အတိအကျတည်နေရာ, ပေါ်
•ဝေမျှမယ်သတင်း - စသည်တို့ကိုအလွန်ကြီးစွာသောသစ်ကိုစားသောက်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး, စတိုးဆိုင်ရောင်းချခြင်း,
သင်တစ်ဦးပါတီမှအိမ်ပြင်သို့မဟုတ် enroute ကြီးစွာသောအတွက်တပ် ချ. , သစ်တစ်ခုမတ်မတ်အဘို့အစျေးဝယ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်, My သူငယ်ချင်းများကိုရှာပါ GPS စနစ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို real-time တွင်သင်၏မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းနေရာချထားရန်လွယ်ကူစေသည်။
နှစ်ခုအခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ: သင်၏လေ့နှောင်းပိုင်းကမိတျဆှေအချိန်ပေါ်ရုပ်ရှင်မှလုပ်တော်မူမည်လော သငျသညျအညီစီစဉ်နိုင်အောင်, သူ / သူမ၏တည်နေရာနဲ့ခန့်မှန်းခြေရောက်ရှိချိန်ကိုအတိအကျရှာရန်သူငယ်ချင်းများ Find ကိုသုံးပါ။ သင့်ရဲ့ directionally စိန်ခေါ်မိတျဆှေ (နောက်တဖန်) ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသလဲ? မိမိသူငယ်ချင်းများကိုရှာပါတဲ့အသက်ကယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေမိတျဆှေ၏တည်နေရာ pinpoints နှင့်သွားလာမှုအကူအညီနဲ့ (ဆိုလိုသညျလမ်းညွန်) ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်အောင်သင်သည်သူတို့၏ဦးတည်ရာမှသူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်။
ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့, ငါ့သူငယ်ချင်းများနေရာချထားခြင်းနှင့်အရှိဆုံးအရေးပါသူကိုလူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်နေဖို့, သင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုကူညီပေးသည်ကိုရှာပါ။ သူတို့အမှန်တကယ်အချိန်အတွက်တည်ရှိသည်ဘယ်မှာသင်သိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီမိတျဆှေ, app ကိုဖွင့်မြေပုံပေါ်တွင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအိုင်ကွန်အဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ မိမိသူငယ်ချင်းများကိုရှာရန်နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ posse တစ်ခုချင်းစီအဖွဲ့ဝင်လုံခြုံစွာအိမ်ပြန်ရောက်ရှိသည့်အခါ သိ. ထဲကညဥ့်ပြီးနောက်လွယ်ကူသောအိပ်နိုင်ပါတယ်။
ထိရောက် Group မှ Communicator
သူငယ်ချင်းများကသင်၏အုပ်စုကို outing စီမံ Find အောင်အသုံးပြုပုံအချိန်နှင့်ခေါင်းကိုက်သိမ်းဆည်းပါ။ သငျသညျသူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်ခုနှင့်အတူတပ် ချ. တာပေါ့ဟုပြော: ဒီနေရာမှာဘယ်လိုပါပဲ။ သူတို့ကိုကြိုတင်ခရီးစဉ်၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်တွင်သူငယ်ချင်းများကိုရှာပါ install ရှိသည်။ အခုဆိုရင်သင်တို့ရှိသမျှ chat နဲ့ထိုကဲ့သို့သောထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ / စျေးဝယ်စာရင်းတာဝန်များကိုအဖြစ်ခရီးစဉ်အသေးစိတ်ကိုညှိနှိုင်း, မြင်ကွင်းများကိုတွေ့မြင်နှင့်အချိန် / နေရာအရပ်တွေ့ဆုံရန်, လမ်းကြောင်းတောင်တက်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။ ကြိုတင်မဲအတွက်ပြု prep အလုပ်နှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏နှာခေါင်းလမ်းညွှန်စာအုပ်သို့မဟုတ်ခရီးသွား app ထဲတွင်သင်ျဂွိုဟျမလိုဘဲအပြင်မှာပိုပြီးကြီးစွာသောပျော်မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင်အစည်းအဝေးအမှတ် enroute ထား. campers တည်နေရာနှင့်၎င်းတို့ရောက်ရှိချိန်ကိုခန့်မှန်းရန် GPS စနစ်ခွဲဝေမှုနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်မိမိသူငယ်ချင်းများကိုရှာပါ။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးကိုဆုံးရှုံးလျှင်ရိုးရှင်းစွာ app ကိုဖွင့်မြေပုံပေါ်တွင်၎င်းတို့၏အိုင်ကွန်၏တည်နေရာကိုသတိပြုပါနှင့်အစည်းအဝေးအမှတ်သူတို့ကိုညွှန်ကြား။ Post ကိုခရီးစဉ်ကိုသင်အဆင်သင့်ပါပဲတဲ့အခါမှာသေချာအားလုံးသင်၏နောက်စွန့်စားမှုစီစဉ်ဖို့, အိမ်ရောက်လာပြီးစေရန်မိမိသူငယ်ချင်းများကိုရှာပါကိုသုံးပါ!
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း Finder ကို (နှင့်ချစ်ကြည်ရေး Saver!)
သူငယ်ချင်းများ, အိုင်ဖုန်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ် Android, Blackberrys နှင့်ပင်ဖုန်းများ feature ကိုရှာပါ။ ရုံ Non-စမတ်ဖုန်းကိုအသုံးပြုသူများကပေးပို့ထားတဲ့စာသားကိုကနေတဆင့်ဖိတ်ခေါ်ပါ။ သူတို့နှင့်အတူ reply တစ်ချိန်က "ဟုတ်ကဲ့" မိမိတို့၏အိုင်ကွန် app ကိုဖွင့်မြေပုံပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ သူငယ်ချင်းများမိတ်ဆွေများကိုရှာတွေ့မှဆဲလ်ဖုန်းမျှော်စင်တြိဂံဖွဲ့ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်တည်နေရာခွဲဝေမှုလွယ်ကူစေသည်ကိုရှာပါ။
အလွန်ကြီးစွာသောသစ်ကိုစားသောက်ဆိုင်ရှာပါ? တစ်ဦးရောင်းချရှိခြင်းတစ်အကြိုက်ဆုံးဆိုင်လား? ဒီ app ကသင့်တည်နေရာကိုဝေမျှနှင့်သင့်မိတ်ဆွေများကိုစျေးဝယ်, ထမင်းစားခန်းသို့မဟုတ်ကခုန်နေကြသည်ဘယ်မှာလေ့လာသင်ယူပေးနိုင်ပါတယ်။
Find My Friends အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Find My Friends အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Find My Friends အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Find My Friends အား အခ်က္ျပပါ
shaswat-raj စတိုး 262 129.08k
Find My Friends ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Find My Friends အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 18.5.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.lready.org/privacy_policy
လက်မှတ် SHA1: 19:C0:86:8F:02:87:57:F4:9F:D8:F7:BD:F3:9F:F7:0C:77:1D:62:2B
အဖွဲ့အစည်း (O): Life360
Find My Friends APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ